मैलुङ खोलाको आईपीओमा आवेदनको ओइरो,कतिले भरे ? || अर्थ/बाणिज्य
मैलुङ खोलाको आईपीओमा आवेदनको ओइरो,कतिले भरे ?
काठमाडौ । मैलुङ खोला जलविद्युतको प्राथमिक साधरण शेयर (आइपीओ)मा आवेदनको ओइरो लागेको छ ।
कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धका सिद्धार्थ क्यापिटलका अनुसार आइतबार ५ बजेसम्म १७ लाख ७६ हजार ७११ जनाले २ करोड ४१ लाख ८३ हजार ४८० कित्ताका लागि आवेदन दिएका छन् ।
यो मागभन्दा करिब ३५.३१ गुणा बढी हो । कम्पनीले बिहीबारदेखि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरले ७ करोड ३६ लाख २८ हजार ६०० रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ३६ हजार २८६ कित्ता आइपीओ विक्रीमा ल्याएको छ ।
मैलुङको आईपीओलाई केयर रेटिङ्ग नेपालले ‘केयर एनपी डि इस्यूअर रेटिङ्ग’ प्रदान गरेको छ । कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ।
मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम २०५९ साउन ७ गते नेपाल सरकार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा प्राइभेट लिमिटेडको रूपमा दर्ता भएको थियो । २०७१ भदौ ६ गते पब्लिक लिमिटेडको रुपमा परिणत भएर कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको छ ।